BARNAAMIJKA DHAQANCELINTA ISA SOODDHIIBAYAASHA
BARNAAMIJKA QARAN EE ISA SOODDHIIBAYAASHA
Barnaamijka Qaran ee La Macaamilidda iyo La Tacaalidda Dagaalyahannada Isa soo dhiibay ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Xafiiska Barnaamijka Dhaqancelinta Dagaalyahannada Isa soo dhiibay, oo hoos yimaada Wasaaradda Amniga, waxaa ujeedkiisu yahay in uu gacan ka geysto xasilloonida mustaqbalka fog ee dalka, iyada oo loo marayo dhiirigelinta isa soo dhiibayaasha xubnaha darajada hoose ee Al-Shabaab, iyo dib ugu biirinta dagaalyahannada Isa soo dhiibay bulshadooda.
In ka badan 2,000 oo dagaalyahannada isa soo dhiibay ayaa helay taageero dhaqan celin ah oo ay ku jiraan tababarro xirfadeed, la talin cilmi- nafsi iyo mid diimeed, iyo taageero ah sidii ay dib ugu biiri lahaayeen bulshada iyo mid dhaqaale, iyada oo lagu saleynayo casharadii laga bartay iyo waayo-aragnimadii laga helay aasaaska barnaamijka. Barnaamijkan dagaalyahannada ayaa dib u eegis iyo cusbooneysiin lagu sameeyay bishii Maarso 2016-ka.
Ujeeddada ka dambaysa in barnaamijkan la hirgeliyo waxay tahay Iyada oo baahida loo qabo in wax looga qabto xaaladda boqolaal dhallinyaro dagaalyahanno ah oo ka firxaday dagaalyahanno kala duwan oo ku yaalla dalka gudihiisa, iyadoo fursadani tahay in la badbaadiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee la marin habaabiyay iyadoo logo yeerayo Nabadda iyo dowladnimada, Barnaamijka Qaranku wuxuu wali sii wadaa inuu hagaajiyo kobcinta howlahiisa si looga hortago loogana hortago xagjirnimada rabshadaha iyo nabadgelyada dalka oo dhan, Afar xarumo ku-meel-gaar ah ayaa lagu aasaasay Muqdisho, Beledweyne, Baydhabo iyo Kismaayo siday u kala horreeyaan, Waxaa Sanakan 2018 Magaalada huusamareeb ee Magaalo madaxda Galmudug Soomaaliya laga hirgeliyay Xarun Caruur ah oo billowgiisaba ay soo goosteen oo ay kusoo xaroodeen in ka badan 71 Caruur ah oo dad’dooddu u haxayso 7 Sano jira Ilaa 17 Jir, iyaoo caruurtaas qaarkood 2 sano ka hor waalidkooda laga watey.
Barnaamijka Qaranka wuxuu gacan ka geystaa dhinaca amniga, xasilinta, cadaalada dib u soo celinta iyo dib-u-heshiisiinta qaran, dhisidda nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee dalka.
Horumarinta olole iyo war-is-gaadhsiin ku saabsan hababka looga hortago iyo ka-tagidda rabshadaha, iyo faa’iidooyinka barnaamijka
Dib-u-habaynta khatarta al-Shabaab ee ka soo horjeeda dagaalyahanada
Dib-u-dhiska khatarta khatarta ah ee ka imanaysa bulshadooda
In la dhiso awooda hay’adeed, iyada oo tixgelinaysa jinsiga, xuquuqda aadanaha, iyo arrimaha ilaalinta carruurta
Al-Shabaab waa ay ku fashilantay iyada oo loo marayo khatar yar oo halis ah
BARNAAMIJKA WACYIGELINTA DADKAADA KA MID NOQO.
Dacwadda cafis siinta kuwa raba inay ka laabtaan Al-Shabaab iyo rabshadaha;
Damaanad qaadka amniga loogu talagalay dagaalyahanka aan cidina wadin;
Barnaamijka Qaranka ee barnaamijka dib-u-dhexgelinta bulshada oo ay ku jirto tababaro xirfadeed iyo taageero joogto ah;
Barnaamijka Qaranka ee bixinta xaalado nololeed oo ka wanaagsan, rajo dhaqaale iyo taageero nololeed oo waara;
Nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo Soomaaliya loo maro iyada oo loo marayo dib-u-heshiisiin iyo ka-saaris rabshad.
Inkasta oo siyaasad qaran iyo sharciyada la xiriira la horumariyo, siyaasadaha ku wajahan kuwa ka soo horjeeda dagaalyahanada oo hagaya cinwaanka Barnaamijka Qaranka, iyo kuwa kale, kuwan soo socda:
Carruurta – Sharciga caalamiga ah, carruurta (ka yar da’da 18 sano) laguma soo celin karo dadka waaweyn. Carruurta waxaa lagu ogaadaa marxaladda baaritaanka (SCREENING)
Dumarka – Raga iyo dumarku waxay marayaan hab dhaqancelin oo isku mid ah, iyada oo haweenka siinaya xarumo gaar ah, ilaalin iyo gargaar sharci, haweenka dib u noqoshada ah, iyo dareenka ay ku hayaan dadka ku tiirsan, gaar ahaan carruurta.
NIDAAMKA ISA SOODDHIIBISTA – Shakhsiyaadka si iskood ah u doortaan inay ku biiraan, oo ku xiran nidaamka baaritaanka. Dagaalyahaniintu waa inay xor u yihiin inay ka baxaan barnaamijka dhaqan celinta marxalad kasta, ka dib qaabsocodka habaysan.
Heerarka khatarta – Qiimaynta in qofka dabacsan ee ka dhexjiray uu yahay mid hooseeya ama khatar sare ah ayaa waxaa sameeya NISA muddada baaritaanka.
Dhibaatooyinka caafimaadka / maskaxda – Dagaalyahanka la soo dhaafay ee leh arrimaha caafimaadka maskaxda waxaa loo gudbiyaa hay’adaha daryeelka caafimaadka takhasuska leh, iyo kuwa leh xaalad caafimaad oo halis ah, sidoo kale waa la soo celin karaa xarumaha ku-meel-gaadhka ah marka la qaboojiyo.
Ahaanshaha Qaran ahaan iyo mas’uuliyadeeda ugu weyn ee ku tiirsan Dowladda Federaalka ee Soomaaliya – iyada oo la shaqeyneysa Beesha Caalamka, iyo wadashaqeynta Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka – Barnaamijka waxaa hogaaminaya Xafiiska Barnaamijka Dib-u-dhiska Dib-u-dhiska ee Amniga Gudaha. DRP waxay mas’uul ka tahay jihada istaraatiijiga ah, hoggaaminta iyo maaraynta hawlgalka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijkan, Fadlan nalaso xiriir: